Astaamaha Beyene Gessesse
Hay'adda McKnight Foundation waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo in Beyene Gessesse uu ku biiri doono International kooxda oo ah sarkaalka barnaamijka. Gessesse waxa uu khibrad dheer u leeyahay horumarinta reer miyiga iyo hindisayaasha haqab-beelka cuntada, isagoo la shaqaynaya beeralayda, cilmi-baarayaasha, xirfadlayaasha horumarinta, iyo maalgeliyayaasha. Waxa uu doorkiisa cusub bilaabi doonaa 29ka November.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan Beyene ku soo dhaweyno kooxdayada, ballaarinta awoodayada si aan u wanaajino helitaanka maxalli, waara, cunto nafaqo leh oo caalami ah," ayay tiri Jane Maland Cady, agaasimaha barnaamijka caalamiga ah. "Beyene wuxuu keenaa go'aan qoto dheer oo ku aaddan haqab-beelka cuntada, nidaamyada cuntada maxalliga ah, cilmiga beeraha, iyo cilmi-baarista beeralayda, iyo sidoo kale aragti kor u qaadi doonta awoodda McKnight ee horumarinta shaqadan muhiimka ah."
"Waan ku faraxsanahay inaan Beyene ku soo dhaweyno kooxdayada, annagoo ballaarinayna awoodeena si aan u wanaajino helitaanka cuntada maxalliga ah, waarta, nafaqeynta adduunka oo dhan." —JANE MALAND CADY, DIRECT BARNAAMIJKA DALKA
Barnaamijka caalamiga ahi waxa uu taageeraa cilmi-baadhista dadweynaha ee xuddun u ah beeralayda taasoo soo saarta saamayn xun, faa'iido u leh beeralayda, deegaanka, iyo danta guud. In ka badan 35 sano, barnaamijku waxa uu qaatay hab deegaan oo dhammaystiran xagga beeraha, isagoo taageeraya cilmi-baarista iyo iskaashiga horseeda horumarrada wax-soo-saarka dalagga, hab-nololeedyada, nafaqada, iyo sinnaanta. Waxay diiradda saartaa saddex bulsho oo ku dhaqan 10 waddan oo ku yaal Andes sare iyo Afrika.
"Gaajada caalamiga ah iyo isbeddelka cimiladu si aan kala go' lahayn ayay isugu xidhan yihiin - labadooduba waxay dalbanayaan dib-u-qaabayn degdeg ah oo lagu sameeyo hababka cuntada ee adduunkeenna," ayuu yidhi Kara Inae Carlisle, guddoomiye ku xigeenka barnaamijyada. "Markaan la kulanno loolankan weyn, Beyene wuxuu noqon doonaa mid gacan ka geysta inaan kobcino oo aan xoojino xiriirkeena - cuntadeena, midba midka kale, iyo meeraheena."
Sida sarkaalka barnaamijka ee McKnight, Gessesse wuxuu ka shaqeyn doonaa cirifka goynta xalalka agroecological-ka qayb qaadashada faylalka caalamiga ah ee mashaariicda cilmi baarista iyo maalgashiga abuura fursado siman oo waara beeralayda iyo nidaamyada cuntada. Wuxuu si dhow ula shaqeyn doonaa Jane Maland Cady, sarkaalka sare ee barnaamijka Paul Rogé, barnaamijka iyo deeqaha Joel Krogstad, iyo maamulaha kooxda Kelsey Johnson.
Beyene Gessesse ayaa hogaaminaya dood kooxeed xilli uu shaqo goobeed ku sugan yahay Tigray, Ethiopia.
Xirfad Diirada Saartay Nidaamyada Cuntada Deegaanka iyo Agroecology
In ka badan 10 sano, Gessesse waxa uu ka shaqaynayay barnaamijyo iyo mashaariic la xidhiidha hababka cuntada deegaanka, cilmiga beeraha, iyo dhimista faqriga. Wuxuu keenaa khibrad caalami ah oo ku saabsan cilmi-baarista, tababarka, la-talinta, horumarinta bulshada, kobcinta awoodda, iyo maareynta deeqaha. Mid ka mid ah waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee xirfaddiisa ka mid ahaa waxay ahayd u adeegida kormeeraha mashruuca iyo khabiirka Barnaamijka Isku-dhafan ee Horumarinta Seed ee Itoobiya, kaas oo ujeeddadiisu tahay in la wanaajiyo helitaanka beeralayda yar iyo isticmaalka noocyada abuur tayo leh si loo kordhiyo wax soo saarka beeraha. Doorkan, isaga iyo kooxdiisu waxay dhiseen iskaashi dawladeed iyo mid gaar loo leeyahay oo wax ka beddelay shaqadii wada shaqayneed ee u dhaxaysay cilmi-baarayaasha, hawl-wadeennada, dawladda, maalgeliyayaasha, iyo beeralayda-kor u qaadista hab-dhaqannada nidaamka abuurka iyo samaynta 50 iskaashatooyinka abuur beeralayda ee gobolka Tigray ee Itoobiya.
Intii uu ku noolaa Addis Ababa, Gessesse waxa uu la aas aasay oo hoggaamiyay Praxis Consulting Plc, isaga oo fulinaya mashaariicda ganacsiga iyo falanqaynta cilmi-baarista, maamulka isbeddelka, iyo qiimaynta. In ka badan 10 sano, waxa uu bare ka ahaa Jaamacadda Mekelle, ee Itoobiya, oo uu bare ka ahaa koorsooyin ku saabsan ganacsiga beeraha, horumarinta reer miyiga, iyo cilmiga bulshada ee beeraha.
Waxa uu u yimid McKnight in ka badan oo uu ka yimid Interfaith Outreach & Community Partners ee Minnesota, halkaas oo uu u adeegay khabiir ku takhasusay deeqaha, iyo ka hor, Waaxda Ganacsiga ee Minnesota, halkaas oo uu ahaa lataliyaha maamulka isbeddelka.
Qaataha 2005 Nuffic (Ururka Dutch-ka ee caalamiga ah ee waxbarashada) isbahaysiga dawladda Nederlaan, Gessesse wuxuu haystaa MSc ee daraasaadka horumarinta caalamiga ah ee Jaamacadda Wageningen & Cilmi-baarista Nederlaan, iyo BA ee maamulka Jaamacadda Mekelle. Intaa waxaa dheer, wuxuu ahaa kaaliyaha cilmi-baarista ee Jaamacadda Gobolka Pennsylvania halkaas oo uu ku bartay beeraha iyo nidaamyada cuntada ee barnaamijka cilmiga bulshada miyiga.
Beyene Gessesse oo ay wehelinayaan hay’ado kala duwan ayaa ka qayb galay aqoon iswaydaarsi ka dhacay magaalada Tigray ee dalka Itoobiya.
Maqaalka Aqoonta Noofambar 2021